October 2017 – Allpuntlander.com
Saaka 5 subaxnimo ayay maleeshiyaad Galmudug weerar kusoo qaadeen xoolo dhaqato ku sugan baadiyaha tuulada Godad ee ku taal bariga Gaalkacyo Gobalka Mudug daanta Puntland. Maleeshiyaadka Galmudug ayaa la sheegayaa in ay saaka wateen 20 Baabuurta dagaalka ee Soomaalidu u taqaan tignikada, waxaana wararku sheegayaan in maleeshiyaadka Galmudug maalmahaanba is diyaarinayeen. Dagaalkaan ayaa daba socda dagaal dhacay wiiggii hore. Dagaalkii wiiggii hore ayaa sabab u ahaa dhul daaqsin dhanka Puntland oo roob ka da’ay oo ay kusoo hayaameen xoolo dhaqato reer Galmudug oo ay galbinayaan ciidan tigniko wata oo Galmudug…
Illaahay Naxariistii Janno haka waraabshee waxaa xalay ku Geeriyooday Magaalada Minneapolis Gen Maxamed Abdhir Muuse Haamaan Taliyihii Hore oo Booliska Soomaaliya 1960. Nin wanaagsan buu ahaa illaahay naxariistii janno ha siiyo dhammaanteen samir iyo iimaan hanaga siiyo Shire Garee Wararkeena
Dagaalka barriga G Mudug oo maanta sii xoogeystay iyo Khasaaraha oo sii kordhaya
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in dagaalkii kasocday bariga magaaladaas uu xoogeystay, khasaaruhuna uu sii kordhayo. Wariyaheena magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in 23 qof oo dhaawac ah lakeenay isbitaalada labada dhinac, ayna sidaas oo kale jiraan tiro dhimasho ah oo labada dhinacba. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in tiradda dhimashadu ay hadda gaarayso 10 qof oo labada dhinac ah. Hubka waa weyn ee Tiknikada ah ayay isku adeegsanayaan labada dhinac oo u muuqda in ay u diyaar garoobeen dagaalkan saaka qarxay, oo ay…
Warqado la helay aya Tilmamaya in Dacwad laga Gudbiyay madaxweynaha Dowla Gobaleedka Galmudug Ahmed Ducaale Gelle Xaaf iyo Gudoomiye ku xigeenka 1ad ee Barlmaanka galmudug xareed cali xareed wararka aya sido kale tilmamaya in maxkamada sare ee dowlada faradaalka soomaliya ay u yeertay masuulyiinta labada dhinac waxana dacwada ka gudbiyay sida la shegayo cali gacal casir gudoomiyaha barlamanka galmudug oo wali ku jira xabsi guri Dawacwada laga Gudbiyay Lbaada Masuul aya looga yeeay in maalinta arbacada ah ee 25 bishan ocktobar ay yimadan magaalada muqdisho ma jiro ilo wareedyo xaqijinaya…
Warar dheerad ah ayaa ka soo baxaya qarax uu geystay qof naftiisa haligay oo ka dhacay magaalada Boosaaso, waxaana wararku sheegayaa in qofkan is qarxiyey uu watay gaari-gacan ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa. Saraakiisha Laamaha Amniga ayaa sheegay in qofka is qarxiyey ay sidaas oo kale ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa ugu dambeyntiina uu qarxay. Goobta uu qaraxan ka dhacay ayaa ku dhaw Albaabka hore ee Saldhiga bartamaha magaalada Boosaaso, waxayna Saraakiisha Amnigu xaqiijiyeen in ujeedadu dabcan ahayd in uu gudaha u galo ama banaanka isku qarxiyo. Ma jiraan cid wax…
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay Qarax. Sida inoo xaqiijiyeen dadka degaanka Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow Saldhigga Magaalada Boosaaso. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in Qaraxaasi uu ahaa Ismiidaamin. Waxii kusoo kordha kala soco allpunlander .com Shire Garee Wararkeena
Faah Faahin , Dagaalka ka Socda Duleedka gaalkacyo iyo Wararkii u Danbeyay
October 22, 2017 admin1
Wararka Haatan naga Soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunt gobalka Mudug ayaa sheegaya in dagaal xooggani oo ka socdo bariga Gobalka Mudug. Dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa galmudug, ayaa ka socda deegaanka gacna-fale, oo ku yaalla bariga gobalka mudug. Gobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalka la isku adeegsanayo Hubka noocyadiisa kala duwan.,Ilaa iyo haatana lama oga khasaaraha ka dhashaya dagaalka oo haatan socda saacado. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in laga dareemayo aagaga labada dhinac, abaabul xooggan oo ay sameynayaan Maleeshiyaad ka soo kala jeeda labada Dhinac. Shire Garee Wararkeena
War Deg Deg ah:- Dagaal ka socda Duleedka Magaalada Gaalkacyo iyo Ciidamada Galmudug oo Weerar soo Qaaday
Wararka ka imaanaya Degaanada Dhaca Waqooyig Gobolka Mudug gaar ahaan Degaanada Miyiga ah ee hoostaga Godod ayaa sheegaya inuu hadda ka soconayo Dagaal Culus oo u dhexeeya Maleeshiyo Xoolo dhaqato ah oo ka soo kala jeeda Maamulada Puntland iyo Galmudug. Dagaalka ayaa la sheegay in u Geystay Khasaare soo kala gaaray Dhinacyada Dagaalamaya,waxaana Dadkii ku dhaawacmay Dagaalka ka socda Tuulooyinka Hoosyimaada Godod la geeyay Isbitaalada ku yaalla Magaalada Gaalkacyo. Illaa hadda ma jirto wax War ah oo ka soo baxay Maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku aadan dagaalka ka socda…
Wasaarada Amniga oo Shaqooyin ka banaan
Ujeeddo: Fursado Shaqooyin Banaan. Wasaaradda Amniga Gudaha XFS waxay soo bandhigaysaa shan fursadood oo shaqo ah ku waasoo kala ah sida soo socoto: Finance Officer Procurement Officer Planning Officer ICT Officer Human Resource (HR Officer) Waqtiga soo gudbinta dokumentiyada waxa uu ku eg yahay taariikhdu marka ay tahay 21 Oktoobar 2017, waxana kusoo diri kartaan info@mois.gov.so idinkoo ilaalinaya waqtiga. Fadlan eeg “TORs” hoos ku qoran si aad u aragtid waajibaadka shanta shaqo ee aan kor kusoo xusnay. FG: Mushaarka qofka ku guuleysta mid ka mid ah shantaan…